Tọghata Pro: Ndu Ọgbọ & Email Opt-In Popup Plugin for WordPress | Martech Zone
Monday, October 19, 2020 Wednesday, February 9, 2022 Douglas Karr
Nyere dominance nke WordPress dị ka usoro njikwa ọdịnaya, ọ bụ ihe ijuanya na ntakịrị ụgwọ a na-akwụ ụgwọ na isi ihe na-arụ ọrụ mgbanwe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mbipụta ọ bụla - ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ blog nkeonwe - na-ele anya iji tọghata ndị ọbịa n'ime ndị debanyere aha ma ọ bụ atụmanya. Agbanyeghị, enweghị ihe dị n'ime ikpo okwu iji kwado ọrụ a.
Convert Pro bụ ihe mgbakwunye WordPress zuru ezu nke na-enye ịdọrọ & dobe editọ, njirimara na-anabata ekwentị, yana ngwa mgbakwunye agaghị adọta ọsọ nke saịtị WordPress gị. Ihe mgbakwunye ahụ na-enye nnwere onwe imewe zuru oke, ihe omume na-akpali akpali, nwere ụda nke njikọta, yana ụda nke ndebiri mara mma ịmalite.
Download tọghata Pro maka WordPress
Tọghata Pro - Ntinye Email Na-eduga Ntanye Ọgbọ
Convert Pro bụ ihe kachasị mfe ma rụọ ọrụ WordPress popup ngwa mgbakwunye nke ndị ahịa n'onlinentanet, ndị na-ede blọgụ, e-commerce weebụsaịtị, ndị mmepe na ndị ọzọ niile pere mpe na nnukwu azụmahịa na-achọ ịbawanye mgbanwe na weebụsaịtị ha. Atụmatụ gụnyere:
Wepu Intent Technology - Site na Convert Pro ị nwere ike ịla azụ ịhapụ ndị ọbịa. Nzube na flash catchy ozi jidere ntị!
Nnwale A / B dị mfe - Ihe nyocha A / B nke Convert Pro na-enye gị ohere ịmepụta ụdị dị iche iche, nwalee ha, ma debe ihe kachasị mma maka ndị na-ege gị ntị.
Multi-Nzọụkwụ Popups - Site na Convert Pro, ị nwere ike ịmepụta popups dị ka ọnụọgụ afọ nke popups, ee, ọ dịghị popups, na ọtụtụ ndị ọzọ!
Zaghachi kpamkpam - Tọghata Pro bụ kpamkpam anabata. Niile atụmatụ e kere site na iji ngwa mgbakwunye a bụ ngwaọrụ, onye ọrụ, yana Google enyi na enyi.
Na Pịa Popups - E wezụga nnukwu nhọrọ nke ihe na-akpalite, ị nwekwara ike ịmepụta popups na-egosi mgbe ndị ọrụ pịa na ederede, onyonyo, bọtịnụ, wdg.
Ezubere iche di elu - Jiri Convert Pro ma mepụta ozi ahaziri iche nke enwere ike igosipụta n'oge kwesịrị ekwesị, tupu ndị na-ege ntị ziri ezi.
Njikọ Email - Tọghata Pro na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu na ndị isi na-aza ajụjụ na ndị na-ere ahịa email. Site na ịrụ ọrụ mbubata na mbupụ pụrụ iche, data email gị bara uru ugbu a na-arụ ọrụ & agile. Otu ntinye njikọ na-eme ka ọ dị mfe ịrụ ọrụ na ntọala ọsọ ọsọ iji jide ma jikwaa data ndu.
Convert Pro bụ ngwa mgbakwunye siri ike nke ga - enyere gị aka ịmepụta listi email, ịkwọ ụgbọala, kwalite vidiyo, kwalite onyinye, ma mee ka ahịa gị kachasị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ahịa dị ka nke a, Convert Pro bụ nhọrọ dị ọnụ ala!
Gbanwee Pro Email Popup Integrations
Njikọ gụnyere ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Campaign Monitor, Campayn, CleverReach, Kpọtụrụ na mgbe niile, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, Mailchimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, SendinBlue, Sendlane, SendReach, zipu, SimplyCast, TotalSend, VerticalResponse na Zapier.
Tags: ule uleActiveCampaignAWeberbenchmarkmgbasa Ozi NyochaaMahadum CampaynEbumnucheKpọtụrụ na mgbe niiletọghata proNtughariConvertKitAhịantapuOnyeka OnwenuGetResponseokpokoroKpọtụrụMicrosoftKlaviyoMad MimimailchimpmailerliteOzimailjetAkwụkwọ oziMailsterMailWizzMauticMoosendmulti-nzọụkwụ popupna-pịa popupsakụkọ mkpesagbapụtapopup ezubere icheSendFoxSendGridSendinBlueSendlaneZigaZigaNaanịTotalKpọọvetikalWordPresswordpress popup ngwa mgbakwunyeike